विश्वकपको क्वार्टरफाइनलको ८ टिममा को को भिड्दै ? - ConfuseNepal
विश्वकपको क्वार्टरफाइनलको ८ टिममा को को भिड्दै ?
२१ असार २०७५, बिहीबार २१ असार २०७५, बिहीबार कन्फ्युजनेपाल0Comments world cup 2018
रसियामा जारि विश्वकपको २१औ संस्करणको प्रिक्वार्टर फाइनल खेल गत मंगलवार सकिएको छ । गत असार १६ गते शनिवार देखि असार १९ गते मंगलवार सम्म भएको प्रिक्वार्टरफाइनल खेलमा १६ टिमको सहभागीता रहेको थियो । उक्त खेलमा १६ टिमबाट ८ टिममा छानिएर क्वार्टरफाइनल खेलमा प्रवेश गरेका हुन ।
भोलिबाट हुने क्वार्टरफाइनल खेलका लागि आयोजत टिम रसियासहित उरुग्वे, फ्रान्स, क्रोएसिया, ब्राजिल, इङ्ल्याण्ड, बेल्जियम र स्वीडेन गरी ८ टिमले भाग लिन पाएका छन । अब हुने क्वार्टरफाइनल खेल भोली शुक्रवार २ वटा र शनिवार २ वटा खेल हुनेछ । जस खेलबाट विजेता ४ टिमले सेमीफाइनलको सामना गर्नेछन ।
फिफाको खेलतालिका अनुसार शुक्रवार क्रमश पहिलो र दोश्रो खेलमा उरुग्वे विरुद्ध फ्रान्स र ब्रजिल विरुद्ध बेल्जियमको भिडन्त हुनेछ । त्यसै गरेर शनिवार क्वार्टरफाइनल खेलको अन्तिम खेल पहिलो र दोश्रो क्रमश स्वीडेन विरुद्ध इङ्ग्ल्याण्ड र रसिया विरुद्ध क्रोएसिया को भिडन्त हुनेछ ।
गोधुली कपको आजको खेलमा धरान १६ सेमिफाइनल प्रवेश, भोली धरान ८ र १८ भिड्दै
बास्केटवल संघको सिफारिसमा १५ विद्यार्थीलाई डिपोट स्कुलले छात्रवृती प्रदान गर्ने सहमति
हारको संघारमा रहेको पीएसजीको भाग्य चम्किएपछि च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनल प्रवेश
रोनाल्डोले खेल जीवन बाट सन्यास नलिने
← प्रदेश नं १ किरात प्रदेशका वैज्ञानिक आधारहरु
यो विश्वकपमा बाहिरिएका ती ४ महारथी →
आश्विन ०६, २०७७ – धरान १ स्थित लक्ष्मी सडकमा रहेकाे धरान
भेटी र सहयोग रकमद्वारा पत्रकारीता पुरस्कार कोषमा प…
इटहरिमा संक्रमण पुष्टि भएका संक्रमितलाई धरान ल्याइ…
राष्ट्रतिले २३३ कैदीलाई आफ माफि दिइन
प्याज लुकाउँदै व्यापारी, सीमापारी रोकिए प्याजका गा…